Mpiambina goavambe - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo128 minitraOlona 6
Misy tsindrin-tsakafo isan-karazany voaomana isaky ny fety Halloween, saingy heveriko fa hohanin'ireo mpiambina mahatsiravina ireo ilay mofomamy Haingana sy mora izany dia ny fanomanana.
Izy ireo dia custard matsiro ary voaravaka miaraka amin'ny cookies Oreo®, izay azo antoka fa hampihorohoro ireo matoatoa, voatavo ary mpamosavy malalantsika ...
Raha mieritreritra ny hiomana a Fety misy lohahevitra Halloween na Samaín Manoro hevitra anao aho hijery ny fizarana manokana ny tranonkala. Azo antoka fa hahita hevitra be dia be ianao!
1 Mpiambina goavambe
Mpiambina haingana sy mora voaravaka manokana ho an'ny Hallooween.
Fotoana manontolo: 2h 8M
pensilihazo mofomamy sôkôla (vahiné)
Valopy 1 an'ny mpiambina vovoka
Ronono 600 ml
Siramamy 4 sotro fihinanana
3 miloko fandokoana sakafo manga (vahiné)
9 miloko fandokoana sakafo mavo (vahiné)
Cookies 6 oreo
Nisafidy solomaso vitsivitsy izahay ary nandoko tarehy monstrous tao anatiny niaraka tamin'ny pensilihazo mofomamy sôkôla.
Napetrakay tao anaty vata fampangatsiahana ny solomaso mba hijanonan'ny sôkôla tsara amin'ny vera ary hotehirizinay.
Ataovy ao anaty vera Thermomix® ny ronono, ny atody atody, ny valopy mitazona, ny siramamy ary ny loko. Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, maripana 90º, hafainganam-pandeha 3.
Esorinay avy eo amin'ny vata fampangatsiahana ny vera ary fenoy ilay mpiambina mandra-pandrakotsika ilay tarehy nolokoina.
Mba hanaovana ny volo amin'ireo tarehy ireo dia mampiasa cookies Oreo® izahay. Manokatra azy ireo amin'ny antsy isika ary manala ny crème avy ao anatiny. Apetrakay ao anaty vera ny cookies ary apetaho 5 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Apetrakay eo amin'ny mpiambina ny cookies, apetraho mandritra ny adiny roa ny vata fampangatsiahana ary vonona hampihorohoro.
Fanazavana fanampiny - Resipeo ho an'ny faritra Halloween
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Halloween, Latsaky ny 1/2 ora, Postres, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Tsotra » Mpiambina goavambe
Tiako izy ireo, tiako izy ireo ary tiako izy ireo. Na ny haingo na ny atiny
Misaotra Goi, masoandro ianao. Ny marina dia mahatsikaiky izy ireo. Heveriko fa miaraka amin'ny fomba fahandro Halloween marobe amin'ity faran'ny herinandro ity dia hisy ny thermomise izay masiaka ...
Tena ehh mila mijanona tsy mijery bilaogy farafaharatsiny aho amin'ny Halloween. Handeha amin'ny fivarotana lehibe aho anio tolakandro haka yogourt sy mpiambina nefa… .. ahoana no hanoherana ny fanandramako hanao ireo mpiambina ireo, tsia tsia sy tsia. Androany dia manomana azy ireo amin'ny faran'ny herinandro aho. Silvia dia tena milay. Andao hojerentsika ny fomba fampifanarahan'izy ireo ahy.
Ataoko an-tsaina fa avy ao amin'ny mercadona ny valopy fitehirizam-boky, sa tsy izany? Zavatra iray ihany koa ny lokon'ny fandokoana dia ahita azy ireo ao amin'ny mercadona?
Mamihina tsara ary izao eny 🙂 faran'ny herinandro lava
Rota, ny lokony ao anaty volo dia heveriko fa novidiako tamin'ny alampo, tsy ho re amiko fa misy ao amin'ny mercadona sy ilay mpiambina nananako mpanjaka na flanin, fa ireo eny an-tsena dia mitovy aminao ihany.
mbea dia hoy izy:
mmmmmmmmmmmmmmmm, manome toky aho fa !! ny setroka thermomix hahahahaha
Mpiambina mahatsikaiky indrindra ary inona no matsiro
misaotra betsaka tamin'ny fizarana fa tsara
Mamaly an'i mbea
Misaotra betsaka anao nahita anao, Mbea. Mitovy aminao ihany aho, manohy manao zavatra Halloween amin'ny fety rahampitso. Mirary ny soa indrindra.
Toa nanan-karena be tamiko izy ireo nefa ny sôkôla dia nivoaka matevina tokoa. Tokony hanana mpiambina vovoka 2 kitapo roa aho.
Mamaly an'i ainhoa
Salama Ainhoa, ampy ny valopy iray an'ny mpiambina, raha manampy roa ianao dia ho matevina loatra. Tsy azoko ny sôkôla. Cookie oreo no tianao holazaina? Mirary ny soa indrindra.
Francisco Jose Camacho Moreno dia hoy izy:
Tena tsara izy io, tena tany am-boalohany, fahazoako milaza izany
Valio amin'i francisco jose camacho moreno
Faly aho fa tianao izy ireo, ny malalako koa tia azy.
Albaris dia hoy izy:
Salama Silvia sy Elena Te-hanontany anao aho, hitako fa amin'ny resipeo maro dia mampiasa pensilihazo sy fandokoana mofomamy misy fofona ianao, saingy tsy fantatro hoe aiza no ahafahako mividy azy ireo. Hahita azy ireo any Carrefour na Mercadona ve ianao? Misaotra betsaka, tiako ny resipeo rehetra. fiarahabana.
Mamaly an'i Albaris
Matetika izahay no mividy azy ireo amin'ny fivarotana lehibe. Toy ny carrefour, alcampo, hipercor… Matetika izy ireo dia avy amin'ny marika vahiné.
Salama zazavavy voalohany amin'ny taona falifaly rehetra, te-hanontany anao aho raha afaka milaza amiko ny fomba fahandro ho an'ny mpikarakara mahazatra izay tianay izy ireo ary tiako ny manomana azy ireo misaotra betsaka
Marimar avelako anao ity rohy mpiambina ity. http://www.vorwerk.com/es/thermomix/html/recetas_thermomix,recipe,view,167,0,search-dosearch-classic-0.html?title=natilla&author=&datefrom=&dateto=&keywords=&category=999&type=999
Ry zazavavy, tsy maintsy misaotra anao aho tamin'ny nanomezanao ity fomba fahandro ity, satria nataoko tamin'ny andro hafa izy ireo fa tsy misy tsindrin-tsakafo tadiaviko loatra, tiako izy ireo, tena tsy manam-paharoa tena matsiroaaaaaaaaaaaa misaotra
Faly aho Marimar. Misaotra anao nanaraka anay.
salama Marimar !! Niezaka nanamboatra azy ireo aho satria ity no fomba fahandro izay voarakitra ao amin'ny boky nomen'izy ireo ahy rehefa nividy ny thermomix aho, ary tena be lasopy izy ireo, toy ny ronono ronono. Nanaraka ireo dingana tokony hatao ve ianao? Misaotra! Oroka !!
Salama! Voasoratra anarana amin'ity pejy ity aho, fa rehefa manindry ny rohy aho ary mangataka solonanarana sy tenimiafina dia tsy avelako izany. Niditra ny pejy lehibe aho ary maro ny fomba fahandro ho an'ny mpiambina. Azonao lazaina amiko ve iza amin'ireo no tena eo amin'ity rohy ity? Misaotra betsaka ary faly amin'ny bilaoginao aho, tsy fantatro hoe inona no mahandro mandra-pahatongako ilay robot. Faly aho manao zavatra. Tohizo, aza miala oroka izahay
Salama ry zazavavy, efa nataoko indroa ity recette ity satria tianay ny mpiambina fa nataoko tsy nisy fandokoana satria tsy natao ho an'ny fety izy ireo fa tianay somary matevina kokoa, angamba miaraka amin'ny ronono kely kokoa dia afaka mivoaka na miaraka amin'ny litatra ronono sy valopy 2 no hivoaka matevina kokoa. Ny marina dia indraindray aho manisy fanovana ary nanjary tsara dia tsara, antenaiko amin'ity iray ity ihany koa hahaha. Ny marina dia misaotra anao aho noho ireo fomba fahandro rehetra ampianarinao anay satria manana zaza vaovao izahay ary tsy mahita ny fomba hikorontananay haha, oroka, tsara tarehy.
Tiako ny zavatra rehetra nataoko ho anao, izao dia manao ronono nendasina aho, hatreto ny zava-drehetra goodiiiisimo rehetra
Valiny amin'ny PEPA
mari pili dia hoy izy:
Salama zazavavy, tsy dia mazava loatra ny habetsaky ny valopy, satria misy valopy mpiambina mpanjaka lehibe, na boaty misy valopy 5, tsy fantatro hoe inona ny vola tondroin'izy ireo, manararaotra milaza aminao aho fa efa manomana ny thermos mandritra ny 5 taona ary mbola tsy nisy nahita sakana toa anao. Tiako ny oroka avy any Tenerife.
Mamaly an'i mari pili